ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | The Noble Eightfold Path
December 18, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | Leaveacomment
December 6, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | Leaveacomment
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖျက်ကြနှင့် + ကြီးပွားချမ်းသာလိုပါလျှင် (ဝေဘူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ. တရားကို သူ.အတိုင်းမထာဘဲ နည်းနည်းလောက် နုတ်ထားလိုက်
မယ်ဗျာ.။ ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းကလေးအပိုထည်.ထားလိုက် မယ်ဆိုပါတော. အဲဒါဟာ
သာသနာပြုတာလား။ဖျက်တာလား။ဖျက်တာပါဘုရား။ အဲသလိုဖျက်တော. သာသနာကပျက်
သွားမှာတဲ.လား၊ အဲသလိုဖျက်တဲ.လူမှာ ပျက်သလား။ ဖျက်တဲ.လူပဲ ပျက်မှာပါဘုရား။ အေး…ဗျာ ဘုရားက ဒီလိုပါဆိုရင် ဒီအတိုင်းသာလုပ်ဗျာ.။
(၁၉၇၃ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ. နံနက်၁၀ နာရီ အင်းကြင်ပင်ရိပ်သာတွင်ဟောချက်မှ)
ဒို. ဘုရားသာသနာက နေပူအောင်လုပ်လို.လဲရတယ်၊ မိုးရွာအောင် လုပ်လိုလဲရတယ်၊ လူ
လာအောင် လုပ်လို.လဲဖြစ်တယ်၊ လူမလာအောင် လုပ်လို.လဲဖြစ်တယ်၊ သစ်ပင်ရှိရင် ဆွမ်းရှိတယ်။
မင်းတို.ဘုရားကြည်.ညိုတာက မတည်.တဲ.သူငယ်ချင်း အိမ်အလည်လာ သလောက်မှ မကြည်
ညိုလို. မင်းတို.မှာ ဘာအကျိုးထူးမှ မခံစားရဘူး။
December 6, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | 1 Comment
သီလဆောင်တည်လို.ပြီးကြပြီ။သီလဆောက်တည်ပြီးလျှင် ပြည်.စုံအောင် ဖြည်.ကြ။ ဖြည်.လို.
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးဧ။် ညွှန်ပြတော်မူလေ့ရှိသော ဓမ္မလမ်းစဉ်
December 4, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | Leaveacomment
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး) ဧ။်ဆုံးမစာ
December 4, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ, ဓမ္မလင်္ကာ | Leaveacomment
၁။ ဖြစ်ပျက်သမျှ ၊ သင်္ခါရ ၊ ဒုက္ခ သစ္စာ မှတ်၊ ဖြစ်ပျက်မှုတွင် ၊ ငါကောင်ထင် ၊ ခင်မင်သမုဒယမှတ် ၊ ရုပ်နာမ် အားလုံး ၊ ဖြစ်ပျက်သုဉ်း၊ ချုပ်ဆုံး နိဗ္ဗာန်မှတ် ၊ ချုပ်ဆုံမှုတွင် ၊ ဉာဏ်သက်ဝင် ၊ သိမြင်မဂ်ဟုမှတ် ။
၂။ ယုံကြည်ကျမ်းမာ ၊ စိတ်ဖြောင့်စွာ ဖြင့် ၊ လွန်စွာ အားထုတ် ၊ နာမ် နှင့် ရုပ်ကို ၊ ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်၊ ဤငါးအင်၊ မှန်ပင်မဂ်ရကြောင်း။
၃။ မစွန့်ကာမ ၊ ဆရာမရှိ ၊ ဝီရိယလျှော့၊ အားအင်ပျော့ခါ ၊ လွန်စွာယူမှား ၊ဤငါးပါး ၊ တရားမဂ်ဖိုလ် ဝေးလေသတည်း။
၄ ။ သူတော် ဆည်းကပ်၊ မြတ်တရားနာ ၊ လျော်စွာအကျင့် ၊ မဂ်ဖိုလ်ခွင့်၊ ရလင့်ဧကန်သာ ။
၅ ။ ငါသည် မုချ သေရမည်၊ အချိန်ပိုင်းသာ လို တော့ သည် ။
Five Ways Of Performing Dāna By Venerable Shwe Oo Min Sayardaw
December 3, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ, English Translation | Leaveacomment
November 27, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ |4Comments
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမ သြဝါဒများ (၂)
November 25, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | Leaveacomment
October 27, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ | Leaveacomment
လောကဇာတ်ခုံ ၊ ဤလူ့ဘုံ၌
မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့်
ငါသွေးတက်ကြွ ၊ လူ့ဗာလတို့၊
များလှဖြာဖြာ၊ အ၀ိဇ္ဇာနှင့် ၊
တဏှာဘီလူး ၊ အမှောင့်ပူး၍
ထင်မှားမလွဲ ၊ သို့စဉ်စွဲလည်း ………..
ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း …… ။
October 27, 2011 | Categories: ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ, ဓမ္မလင်္ကာ | Leaveacomment